योगेश भट्टराईको चेतावनी– कांग्रेस बचाउन अब गोविन्द केसी नै चाहिएको हो ?
२०७५ असार २६ मंगलबार ०५:०८:००
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले गोविन्द केसी, गंगामाया अधिकारी र बालकृष्ण ढुंगेलको नाममा राजनीति नगर्न चेतावनी दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
उनले गोविन्द केसीका मागमा आफूहरु खुलामञ्चमा छलफल गर्न तयार रहेको बताए ।
“गोविन्द केसी, गंगामाया र बालकृष्ण ढुंगेलका नाममा ब्ल्याकमेल भएको छ,” भट्टराईले भने, “कांग्रेस बचाउन अब गोविन्द केसी चाहिएको हो ? उहाँको जीवन रक्षा हुनुपर्छ । गोविन्द केसीले राखेका प्रत्येक मुद्दाहरु हामी खुलामञ्चमा पनि छलफल गर्न तयार छौं ।”